पाप र धर्मको हिसाबकिताब !
पाप र धर्म । समाजमा यी दुई पाटोको राम्रो हिसाबकिताब राख्ने मान्छेहरूको संख्या कम छैन । फलानाले पाप गर्यो, उसले धर्म गर्यो । ऊ कति ‘पापी’ । ऊ कति ‘धर्मात्मा’ । के मान्छेले मान्छेको पाप र धर्मको मापन गर्नसक्छ ? पक्कैपनि सक्दैन । फेरि किन हामीहरू पाप र धर्मका कुरामा अडिएर भगवानका शरणमा पुगिरहेका छौं ? एउटा सत्य के हो भने आस्तिकहरूको समर्पण सदा भगवानप्रति रहन्छन् । उनीहरू सदा फुर्सदमा मठमन्दिर पुग्छन् । धुपबत्ती गर्छन् । दर्शनमा भेटी चढाउन भुल्दैनन् । अनि मन्दिरको छेऊमा दुःखीलाई नदेखे जस्तैगरि छिःछि गर्दै घर फर्किन्छन् । जसले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका ‘कुन मन्दिरमा जान्छौं यात्री’ पढेका छन्, जसले परिभाषा बुझेका छन् । उनीहरूको श्रद्धा र भक्ति मन्दिरभित्रको ढुङे मुर्तिमा भन्दा गरिब मान्छेको सेवामा तत्पर रहन्छन् । केहीदिन अघिको रामनवमी । चैते दशैंका रूपमा धेरैले यसलाई धुमधाम शैलीमा मनाए । शुभदिन परेकोले म पनि संकटा मन्दिर पुगेँ । मन्दिरमा दर्शनका लागि बसेका लाईन चार फेरो घुमेको थियो । यति व्यापक भीडमा ठेलमठेल र पूजाआजाका साम्रागीको बिक्रीपनि अरू दिनभन्दा ज्यादा थियो । यहाँ धर्म कमाउने र बेच्ने ताँती गनी साध्यै थिएन ।
उता मन्दिरमा विराजमान संकटा मौन । मन्दिरमा सबैले भगवान साक्षी राखेर सबैले आ–आफ्नै स्वार्थ र भजन गाइरहेका छन् । आस्तिकको भीडमा लुकेर बसेका नास्तिक मन्दिर छेउछाउ नै देखिन्छन् । मैले कहिकतै विद्धानबाट सुनेको छु । पाप र धर्म, हामीअघि नै छन् । सास रहुन्जेल यसको बाँकी बक्यौता हिसावकिताब चुक्ता गर्नुपर्छ । हामीले बोकेको पाप र धर्मको लेनदेन भएसम्म मुक्ति मिल्दैन । यस’bout धेरै जानकार छन् । तरपनि आफुभित्रको पाप नदेखेर धर्म कमाउन अहोरात्र व्यस्त छन् मान्छेहरू । मान्छेलाई कति धर्म भयो भने पुग्ला ? यसको पनि मापन छैन । न हिसाब छ, जीवनभरमा कमाएको धर्मको ’boutमा हिसाब । एउटै मान्छेले पाप÷धर्म कमाउँदै छन्, अनि विभिन्न माध्यमबाट बेचिरहेका छन् । मान्छे नै हुन् । आस्तिक वा नास्तिक । पूजाआजामा समर्पण भएपनि वा नभएपनि । विश्वास र सद्भावको एउटा मानिएको बिन्दु सबका हुन्छन् । मार्ग फरक हुनसक्छ तर पुग्ने गतव्य एउटै हो । आखिर पाप÷धर्मको हिसाबकिताबमा हिन्दु, बौद्ध, क्रिश्चियन, मुश्लिम वा अन्य कुनै धर्म । सबैका आफ्ना नियम हुन्छन् । सद्भाव र समर्पण हुन्छन् । जीवनको यात्रामा संकलित पाप÷धर्मको हिसावकिताब हुन्छन् । बुझेर वा नबुझेर पाप÷धर्मका ’boutमा हामी निकै सचेत बनिरहेका हुन्छौं । समाजका पुर्खाले सिकाउँदै आएको सिद्धान्तमा उभिएर पाप÷धर्म छुट्टयाउन जान्यौं । मान्छेमा रहेको यो महानताले अठ्यारा प्रश्नहरू उठाएका छन् । आखिर आजसम्म हामीले कति पाप गरयौं ? कति धर्म गरयौं ? कतै हिसाब छैन् । न कसैले दिनसक्छ ? अस्तु